Ajụjụ - Smart Weigh Packaging Machinery Co., Ltd.
Ahịa anyị n'okpuru ọrụ gị na ihe achọrọ. Anyị ga-ezitere gị ndepụta ọnụahịa emelitere mgbe ụlọ ọrụ gị kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
Ee e, igwe MOQ anyị bụ igwe setịpụrụ 1. N'ezie, akụkụ ahụ mapụtara MOQ abụghị 1 pc.
Ee, anyị nwere ike ị nye asambodo CE, nri 304 nke igwe anaghị agba nchara, akwụkwọ ikike azụmaahịa na ndị ọzọ.
Na mkpokọta, ahịrị ụzọ eji ebu ihe zuru ezu bụ ụbọchị iri anọ na ise. Otu igwe akụrụngwa bụ ụbọchị iri abụọ. Ọ bụrụ na ịnwee iwu ọsịsọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị, ikekwe igwe ịchọrọ dị na ngwaahịa anyị.
Can nwere ike ịkwụ ụgwọ a na ụlọ akụ anyị, TT ma ọ bụ LC.
Ọnwa iri na ise kemgbe ebubata ya. Anyị na-akwado ọrụ akụkụ kọmputa na aka ọrụ ya. Anyị nkwa anyị ka afọ ojuju nke ngwaahịa anyị. Na ikike ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ọdịbendị nke ụlọ ọrụ anyị iji dozie ma dozie nsogbu niile nke ndị ahịa na afọ ojuju onye ọ bụla
Ọnụahịa mbufe ahụ dabere n'ụzọ ị họọrọ iji nweta ngwaahịa. Gbọ elu ahụ bụ ụzọ kachasị ọsọ ma dịkwa oke ọnụ. Osimiri mmiri kachasị mma iji nweta nnukwu ego. Gharịrị ọnụ ahịa enwere ike inye gị naanị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa ego, ịdị arọ na ụzọ. Biko kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe.